Fa maninona ny alikako tsy hihinana na hisotro rano? | Tontolo alika
Na dia efa ela aza isika no nanana alika dia misy fotoana tsy ahafantarantsika ny antony maninona ny biby fiompinay no mijanona tsy misakafo sy misotro intsony.
Betsaka ny antony mety hitrangan'izany amin'ny alika. Amin'ny fotoana rehetra dia zava-dehibe ny fahalalana ny antony mahatonga ny alikantsika tsy hihinan-kanina intsony ary tsy hisotro rano, mba hanatanterahana ny fitsaboana sahaza an'ireo karazana olana ireo.
1 Antony tsy te-hihinana ny alika
1.1 Marary izy
1.2 Ho an'ny vaksiny vao tsy ela akory izay
1.3 Tontolo iainana sy dia lavitra tsy fantatra
2 Antony mahatonga ny alikako tsy hisotro rano
2.3 Olana nify
3 Ahoana ny fomba hamonoana alika tsy te hisotro rano?
4 Ny alikako tsy mihinana na misotro
5 Ny alikako tsy misakafo sy matory be
6 Ny alikako tsy mihinana na misotro ary malahelo
7 Ny alikako dia tsy nisakafo na nisotro nandritra ny roa andro, inona no ataoko?
8 Tsy te hihinana ny alikako fa misotro rano fotsiny
8.1 Inona no mety hitranga amin'ny alika raha tsy te hihinana na hisotro rano izy?
9 Ny alikako tsy mahay misotro rano
10 Inona no hatao raha tsy mihinana ny alikako?
10.1 Atolory zavatra tiany izy
10.2 Mandania fotoana miaraka aminy
10.3 Ovao ny sakafo
10.4 Omeo yaorta
Antony tsy te-hihinana ny alika
Toy izany koa no mitranga amin'ny olona, ​​maro ny antony mahatonga ny alika tsy mety mihinana indraindray. Ny sasany amin'izy ireo dia mety ho ireto manaraka ireto:
Rehefa mihena ny fahazotoan-komana, mazàna dia famantarana tsy azo iadian-kevitra fa misy ny fisian'ny aretina sasany, indrindra raha mampiseho andianà soritr'aretina hafa miaraka aminy ny alika.
Na eo aza ny tsy fahampian'ny fahazotoan-komana dia tsy midika foana izany fa aretina lehibe izy io, izany no antony ilana mitsidika ny mpitsabo biby, satria raha tsy izany, ny alika dia mety hampidi-doza kokoa noho ny aretina mitovy amin'ny homamiadana.
Ho an'ny vaksiny vao tsy ela akory izay
Na eo aza ny maha tompon'andraikitra amin'ny famonjena ny ain'ny biby fiompy maro ireo vaksinina ireo, matetika izy ireo dia mety hiteraka voka-dratsy sasany. Ny maro amin'izy ireo dia mety ho malemy paika ary fohy ihany koa, ary eo amin'izy ireo dia afaka mahita tsy fahazotoan-komana vetivety isika.
Tontolo iainana sy dia lavitra tsy fantatra
Raha hitantsika fa ara-dalàna ny filan'ny alika, saingy mihena izany rehefa mandeha miaraka aminy isika na raha sendra nifindra trano hafa isika, azo inoana fa tsy te hihinana ny alikantsika satria tsy hainy ny tontolo iainana, miteraka an'io fanahiana.
Misy ny alika izay mety ho lasa mitaky be loatra, ary ny toe-javatra sasany izay tsy ahitan'izy ireo aina, na noho ny fisian'ny alika mahery setra, na satria ny mpamatsy dia eo amin'ny toerana tsy ankafiziny, avelao hisakafo ary misotro.
Antony mahatonga ny alikako tsy hisotro rano
Betsaka ny antony ahafahan'ny alika mandà rano. Ireto ny sasany amin'izy ireo:
Ity dia iray amin'ireo fahavalon'ny alika lehibe, satria noho io dia mety manana olana ara-pahasalamana ianao, izay raha tsy voatsabo dia mety hivadika aretina lehibe.
Misy ny aretina ateraky ny viriosy. Ny sasany amin'ireto aretina ireto izy ireo dia mety ho rabies, letopspirosis na distemper. Tsy maintsy mandeha any amin'ny mpitsabo vetivety isika, raha vao misy ny ahiahy na kely aza.
Iray amin'ireo olana mahazatra izany miteraka tsy fahampian'ny hetaheta sy fahaverezan'ny fahazotoan-komana. Ny fanaintainana sy ny tsy fahamendrehany dia mety amin'ny fanaovan-javatra izay mitaky fampiasana ny nify na mampihetsika ny vava, dia mety ho an'ny alikanay hijanona tsy hihinana sy hisotro.
Ahoana ny fomba hamonoana alika tsy te hisotro rano?
Rehefa mandà tsy hisotro rano ny alika ary mila hosorana rano, safidy mety dia ny manolotra hena na ron-kena, satria ny tsiro sy ny fofon'ity sakafo ity dia tsy vitan'ny hoe hanokatra ny fahazotoan-komana sy hampirisika anao hihinana, fa amin'izay kosa dia hahatonga anao hangetaheta bebe kokoa noho ny rehefa mihinana ny sakafo mahazatra anao ary amin'ny fotoana iray ihany, dia hahafahanao mihinana rano iray.
Amin'ity tranga ity dia mila misoroka ny fampidirana sira sy karazana zava-manitra ianao. Toy izany koa, azo atao ny manome cubes misy ranomandry, satria mazàna ny alika dia matetika no mihinana cubes glasy ary amin'ireny tranga ireny izay narary sy / na manana olana amin'ny fividianana rano, ity safidy ity dia mety tsara hahatratrarana izany. hydrate.
Ny alikako tsy mihinana na misotro
Ny antony tsy itadiavan'ny alikantsika misotro na misakafo dia samy hafa be. Ny tena lehibe indrindra ary nifaneraserantsika teo aloha dia ny fihenjanana, na dia mety ho antony tsy fahampian-tsakafo ihany aza ny fiovan'ny fahazarana ao an-tranontsika. Toy izany koa, ny alahelo, toy ny fitaintainanana, dia ahafahan'ny alika mandalo tsy firaikana be loatra ka tsy dia liana firy amin'ny sakafo.
Amin'izany, azo inoana fa raha mamahana zavatra mitovy isan'andro isika, dia hahatsiaro ho leo amin'izany ny alikantsika. Toy izany koa, loza hafa lehibe iray hafa, fa amin'ity indray mitoraka ity noho ny tsy fahampian'ny hetaheta, dia ny tsy fahampian-drano, satria ny fatin'ny alika dia mety lo ao anatin'ny fotoana fohy rehefa tsy ampy ny rano takiana.
Ny alikako tsy misakafo sy matory be
Na dia mahazatra indrindra aza ny milaza fa ny saka dia matory efa ho 50% amin'ny fiainany, ny marina dia azo atao ihany koa ny milaza izany momba ny alika. Mandritra ny maha-alika kely azy, ny alika dia afaka mandany 17 ora isan'andro matory, raha olon-dehibe izy ireo dia afaka matory mandritra ny 14 ora isan'andro.
Na izany aza, ny tena olana dia tsy hoe matory matetika ny alika, fa rehefa mifoha izy dia tsy mavitrika, miseho manjombona, malahelo ary toa tsy maniry hanao na inona na inona, na misotro rano na misakafo.
Amin'ireo tranga ireo izay mifoha ilay alika ary tsy ela dia matory indray, ary matetika matory ora maro kokoa noho ny voalaza teo aloha, azo inoana fa voan'ny hyperthyroidism izy.
Toy izany koa, rehefa tsy te hihinana ny alika, na dia manome azy sakafo matsiro kokoa noho ny mahazatra aza, ary toa mampalahelo izany, na dia tsy misy antony tokony hahatongavany aza, Azo atao ny manolotra patolojia sasany mifandraika amin'ny rafitra fandevonan-kanina, amin'ny voa na zavatra matotra kokoa aza.
Amin'ireny tranga ireny, Ilaina ny manamarina raha misy tazo ny biby na / na raha nihena be ny lanjany. Na izany aza, tokony holazaina ihany koa fa ireo soritr'aretina ireo dia tsy manondro aretina matetika, ka tsy misy antony hanombohana fanahiana alohan'ny fotoana, na dia ho tsara kokoa aza ny ho voaro noho ny miala tsiny.
Toy izany koa, tokony homarihina fa na izany na tsy izany, torohevitra hatrany ny manatona mpitsabo biby mahatoky izay hiandraikitra ny fanatanterahana ireo fitsapana sahaza azy mba hahazoana diagnostika marina sy hamaritana ny fitsaboana sahaza azy indrindra.
Ny alikako tsy mihinana na misotro ary malahelo
Anisan'ny antony mahazatra indrindra ny alika tsy te hihinana na hisotro, dia misongadina fa mety mampalahelo izany. Ny antony ao ambadik'ity alahelo ity dia mety ho samy hafa be, na izany aza, ny fahita indrindra dia ny fahatsapan'ilay alika fa tsy nahazo fiheverana toy ny teo aloha intsony izy.
Rehefa mahatsapa fiovana amin'ny fiainantsika isika izay mety hiova amin'ny fomba ahoana na amin'ny firy isika no milalao amin'ny biby fiompintsika, rehefa mahatsapa alahelo ny tenantsika na raha tsy mandany fotoana be intsony miaraka aminy isika dia mety hihena ny fihetsiky ny alika ary manapa-kevitra ny tsy hihinana na hisotro rano izy.
Vahaolana iray hampiasana ny alika hihinana sy hisotro rano dia matetika ny mijanona eo anilany rehefa manolotra ny sakafo, manome azy sakafo matavy be kalitao ary miaraka amin'ilay alika rehefa mitsako.
Ny fanolorana sakafo faran'izay avo lenta izay misy otrikaina tsara dia hanampy azy hiverina amin'ny fahazotoan-komana., indrindra rehefa aroso mafana, satria ny fofony dia hampirisika anao hanandrana azy. Raha misy rano dia afaka mandraraka rano kely ao amin'ny trough isika ary manome hydration fanampiny koa.
Ny alikako dia tsy nisakafo na nisotro nandritra ny roa andro, inona no ataoko?
Amin'ny tranga tena faran'izay mafy, ny alika dia afaka miaina mandritra ny herinandro maromaro nefa tsy mihinana sakafo, na dia tsy afaka manao izany aza raha tsy misy rano; raha ny tena izy, raha tsy mihinana rano izy ireo dia mety haharitra andro vitsivitsy. Na izany aza, misy toe-javatra izay tsy dia tafahoatra izay alehan'ilay alikantsika andro maromaro nefa tsy misakafo noho ny antony maro samihafa.
Ao an-trano, rehefa mahatsapa fa tsy mihinana ny sakafony ny alikanay, ilaina ny mitsidika mpitsabo bibyRaha alika kely io na raha alika antitra marary be na misy soritr'aretina toy ny fandoavana, fivalanana na tazo dia ilaina ny manatona mpitsabo vetivety avy hatrany.
Raha ny alika salama dia azo atao ny miandry iray andro, hijerena raha misy tsy mahazo aina vetivety. Na izany na tsy izany dia ilaina foana ny manatona ny dokotera mpitsabo anao mba hialana amin'ny olana sy hisorohana ny toe-javatra matotra kokoa.
Tsy te hihinana ny alikako fa misotro rano fotsiny
Rehefa tsy te hihinana ny alikantsika, azo atao izany fa famantarana fa manana patolojia vitsivitsy ianao. Ny lisitry ny aretina izay mety hiteraka fahaverezan-komana tanteraka amin'ny alika dia be dia be, ary ao anatiny dia afaka mahita olana malefaka (aretim-pandevonan-kanina) ary koa ireo lalan-dra matotra kokoa (ohatra, parvovirus an'ny kaninina).
Rehefa mandà tsy hihinana ny alika dia mety hipoitra ny toe-javatra toy ny hoe tsy mihinana sakafo ny alika fa entam-panahy na tsy mihinana ary mandany rano fotsiny, na dia misy aza ny toe-javatra izay mety handavana ny sakafo sy ny rano.
Raha ny mahazatra, ireo toe-javatra ireo dia toa miseho ho vokatry ny tsy fahampiana manokana izay, amin'ny ankapobeny, dia mirona aorian'ny ora maromaro nefa tsy mila manao na inona na inona.
Inona no mety hitranga amin'ny alika raha tsy te hihinana na hisotro rano izy?
Raha manaitra ny alikantsika tsy mety mihinana dia mety ho lehibe kokoa ny olana rehefa tsy te handany rano koa izy ary toa maharitra ny toe-javatra.
Raha, ankoatr'izany, ny alika dia very fatiantoka betsaka noho ny fivalanana sy ny fandoa, mety ho tsy ampy rano ianao; zavatra iray izay tena mampiahiahy an'ireo alika ireo izay marefo kokoa, ohatra ny alika kely, alika geriatrika na marary.
Ity karazana toe-javatra ity dia mety ho famantarana fa ny alikantsika dia mijaly amin'ny patolojia sasany izay misy fiatraikany amin'ny rafi-pandevonan-kanina, na dia mety ho famantarana aza ny aretina izay misy fiatraikany amin'ny voany sy / na ny fony, ary vokatr'izany, dia miteraka fihenan'ny be na totalin'ny ny filan'ny alika, ary koa miteraka fandoavana sy lo.
Tokony ho ao an-tsaina amin'ny fotoana rehetra fa ny alika tsy ampy rano amin'ny ankapobeny dia mampiseho ny fihenan'ny fahazotoan-komana, noho izany dia ilaina ny miantoka ny famenoana ny tsiranoka fa tsy amin'ny zana-kazo ihany, fa amin'ny intravena koa; izay ilana azy io ny fitondrana ny alikantsika any amin'ny foibe fiompiana biby.
Ny alikako tsy mahay misotro rano
Raha ny alikantsika dia matetika amin'ireo izay mandao ny tany feno vongan-drano feno rehefa misotro rano, eny fa na dia manary rano betsaka noho ny laniny aza.
Mahazatra antsika ny gaga mahita fa tsy ny alika rehetra no mazoto manao izany. Saingy mifanohitra amin'izay eritreretin'ny maro amintsika fa tsy noho izy tsy mahay misotro rano fa noho ny antony hafa.
matetika, mazàna ireo alika lehibe kokoa dia toa mamela ny zavatra mando rehetra rehefa misotro rano, raha ny alika kely antonony sy kely kosa dia mazàna miavaka amin'ny fahalianana kely ary saika tsy fanakorontanana. Na izany na tsy izany dia tsy maintsy fantatrao fa antony tsotra fotsiny no mahatonga an'io: ny haben'ny vavan'ny alika.
Toy izany koa, misy alika marobe izay manjary maloto be satria tsy mianatra misotro rano mivantana avy amina loharano iray izy ireo; amin'ity tranga ity dia satria ny alika dia mitaky ny hitoniana ny rano mba hisotroana.
Ka tsy ilaina ny manahy rehefa mahita izany, rehefa misotro amin'ny loharano iray, ny alika dia mikohaka sy / na sempotra kely, satria ho an'ny biby ity fomba fihinanana rano ity dia sarotra be.
Amin'ity tranga ity, ny zavatra mety indrindra dia ny famenoantsika kitapo kely rano kely avy amin'ilay loharano ary apetrantsika amin'ny tany izany mba hahafahan'ny alikantsika misotro ara-dalàna, toy ny loaka kely.
Inona no hatao raha tsy mihinana ny alikako?
Araka ny efa noresahintsika, ny antony mahatonga ny alika tsy hihinan-kanina dia mety ho samy hafa be sy amin'ny ankapobeny, dia noho ny antony ara-batana no mahatonga azy ireo; na izany na tsy izany, ilaina foana ny mitondra ny alikantsika any amin'ny mpitsabo biby mba hialana amin'ny mety ho patolojia matotra ary hahitanao ny antony tsy tianao hisakafoanana.
Ny alika tsy mihinana na misotro, raha mbola zavatra tsy maharitra dia tsy tokony hanahy be loatra ianao. Fa raha tazonina arakaraka ny fandehan'ny fotoana ity fanjakana ity dia mety hanimba ny fahasalamany ilay biby ary izany no antony ilana mihetsika haingana mba tsy hisy zavatra hitranga aminy.
Amin'io lafiny io dia tokony ho tadidinao fa rehefa tsy mihinana rano ny alika, toy ny olona, ​​dia mijaly noho io tsy fahampiana io ny taovany ary mety hiteraka olana lehibe izany. Noho izany, ho fanampin'ny zavatra rehetra nolazainay taminao, dia nieritreritra ny hanome anao toro-hevitra sy fanafody vitsivitsy izahay hampirisihana ny alikanao hihinana sy / na hisotro.
Atolory zavatra tiany izy
Fantatsika rehetra fa ny alika dia "vaky" amin'ny sakafo na zava-pisotro iray. Ohatra, misy alika adala mamy; ny hafa, ny voankazo, ny hafa ny hena... Eny, momba ny fanolorana io alika io izay tsy te-hihinana na hisotro zava-matsiro izay sarotra ho azy ny manohitra azy izao.
Tsy tokony hanararaotra koa ianao, manolora azy kely fotsiny hijerena raha maka fanahy azy izy dia hihinana, satria matetika no tsy manan-kohanina amin'ny sakafo dia satria tsy tsapany ny zavatra atolotrao azy. Noho izany, ity takelaka ity dia afaka manome anao famantarana izay mety hitranga eo aminy.
Ary inona no ataontsika amin'ny fisotroana? Eny, azo inoana fa manana rano izy ary raha tsy misotro izy dia manana olana isika. Ahoana anefa raha manolotra rano azy amin'ny fitoeran-javatra hafa ianao? Misotro any ve ianao? Ahoana raha tsy ronono no omenao azy (izay mahazaka azy, mazava ho azy)? Manandrama manome fluide hafa izay tsy manimba azy. Ekenao ve izy ireo? Indraindray ny rano sotroiny dia mety ho ratsy, ary tsikaritr'izy ireo, noho izany dia mijanona tsy misotro avy any izy ireo fa amin'ny fotoana maro dia afaka manao izany amin'ny toerana hafa.
Mandania fotoana miaraka aminy
Indraindray mahatsapa alahelo sy manirery ny alika. Ary misy fiatraikany amin'ny sakafon'izy ireo izany. Na izany aza, raha mandany fotoana amin'izy ireo ianao, na dia mizara fotoana aza rehefa misakafo na misotro, ny alika dia mety ho liana amin'izany sakafo na zava-pisotro izany koa, amporisiho izy hanao izany.
Mazava ho azy, alao antoka fa ny haninao dia tsy manimba azy ireo, indrindra raha manana olana amin'ny vavony ny biby fiompinao. Miezaha mitady sakafo sy zava-pisotro hatolotrao foana ho an'ny alikanao mba hahitany fa afaka mihinana mitovy aminao izy.
Ovao ny sakafo
Indraindray ny alika dia tsy hihinana tsotra izao satria tsy hitany fa manome fahafinaretana ho azy ny zavatra atolotrao azy ireo. Etsy ankilany, raha manova ny sakafo ianao, dia miova ny toe-javatra. Amin'io lafiny io, alika maro no tsy mahazaka tsara ny famahanana, indrindra ny sakafom-bary "mora" izay tsy misy tsiro na mety tsy azo atolotra azy ireo.
kosa, raha manome karazan-tsakafo hafa, na sakafo ianao, dia miova ny zavatra. Izany no tsy maintsy andramanao. Raha lazaina amin'ny teny hafa, miresaka momba ny fahitana raha mihinana zavatra hafa ny alikanao alohan'ny sakafo mahazatra na sakafo.
Ohatra, alao sary an-tsaina hoe omenao azy foana aho mieritreritra fa tsy mihinana azy izy. Fa kosa, raha ataonao lovia an-trano izy dia mihinana azy, na sakafo mando. Raha izany dia mety mila mieritreritra ny karazan-tsakafo arahin'alikao ianao mba hahafahany mamelona.
Ary ahoana ny amin'ny rano? Sarotra kokoa ny zava-drehetra eto. Satria ny alika dia omena rano paompy, fa ahoana kosa raha tsy tian'izy ireo izany? Azonao atao ny manandrana manova ny fitoeran-drano (Mety hoe nanome fofona azy izany ary izany no antony tsy fisotroany), na koa nanolorany rano tavoahangy hahitana raha mahazaka izany izy. Amin'io lafiny io dia miresaka momba ny "fisedrana sy lesoka" izahay mba hialana amin'ny olana lehibe misy amin'ny fandehanana any amin'ny toeram-pitsaboana
Marina ny anao, yaorta voajanahary dia afaka mamporisika ny alikanao hihinana. Raha ny marina, yaourt, raha mbola tsy misy additives, loko ... dia mety hahasoa be (toy ny mitranga amin'ny olona). Ary manaitaitra ny fihinanana izany.
Voalohany indrindra, mahasosotra izy io - tsy mila ketraka hitsakoana ianao; ary, amin'ny lafiny iray, dia mitondra ranon-javatra ihany koa. Raha ny marina dia maro ny dokotera mpitsabo no manohana azy io amin'ny sakafony satria hampandroso ny tsinainy izany.
Eny, mamaky azy tsara ianao. Saingy mendrika izany ho anao izahay. Ny tadiavinay dia ny manome ny herin'ny biby fiompinao sy mampahatsiaro azy ho tsara, na dia tsy mihinana na misotro aza ianao. Fa maninona Eny, satria izy io dia famenon-tsakafo afaka manampy anao hihinana, ho mavitrika kokoa, ary hanamaivana amin'ny fomba sasany ny olana mahazo anao.
Sotro iray isan'andro isan'andro dia ampy. Fa manandrana misakafo sy misotro mahazatra foana. Azonao atao ny mividy ny Ceregumil avy amin'ity rohy ity.
Raha sanatria ka tsy misy mety aminao dia tsara kokoa ny manatona mpitsabo biby ianao mba hanao ireo fitiliana mifandraika aminy mba hahafantarana izay mety hitranga aminy sy ny antony nitrangan'ity toe-javatra ity.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Tontolo alika » Alika ankapobeny » aretina » Fa maninona ny alikako tsy hihinana na hisotro rano?
AR Moya dia hoy izy:
Ity lahatsoratra ity dia lava sy tena tsy marina ary tsy manana fampahalalana mifandraika sy ilaina. Marina tokoa. Misaotra ny fotoananao koa.
Valiny amin'i AR Moya